Ikhala kanjani imbobo emnyama: Ukutholwa okusha kweNASA | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 16/05/2022 08:42 | Isayensi yezinkanyezi
Imbobo emnyama emaphakathi neqoqo lomthala i-Perseus iye yahlotshaniswa nomsindo kusukela ngo-2003. Lokhu kungenxa yokuthi izazi zezinkanyezi ze-NASA zithole ukuthi amaza okucindezela avela emigodini emnyama abangela ukugeleza kwegesi eshisayo kuleli qoqo lomthala. Umsindo orekhodiwe ungahunyushwa ube inothi, thina njengohlobo lwabantu esingakwazi ukulizwa ngoba lingama-octave angama-57 ngaphansi kukaC omaphakathi. Manje i-sonority entsha iletha amanothi engeziwe kurejista. Ikhala kanjani imbobo emnyama? Kuyinto eye yakhathaza umphakathi wesayensi.
Ngakho-ke, sizokutshela ngokujulile ukuthi imbobo emnyama izwakala kanjani nokuthi itholwe kanjani.
1 Ikhala kanjani imbobo emnyama?
2 Amazwi engeziwe kwenye imbobo emnyama
3 Bawubambe kanjani umsindo?
4 Ukusabela komphakathi ekutholakaleni
Ngandlela thize le sonication ihlukile kunoma yimuphi umsindo othathwe ngaphambili ngoba iphinda ivakashele amaza omsindo wangempela atholakala kuwo Idatha evela ku-NASA's Chandra X-ray Observatory. Kusukela ebuntwaneni, besilokhu sifundiswa ukuthi akukho msindo emkhathini. Lokhu kusekelwe eqinisweni lokuthi indawo enkulu empeleni iyi-vacuum. Ngakho-ke, ayinikezi noma yiziphi izindlela zokusabalalisa amagagasi omsindo.
Nokho, iqoqo lomthala linenani elikhulu legesi elihlanganisa amakhulu noma izinkulungwane zemithala. Ngale ndlela, bakha indlela yokuhamba ukuze amaza omsindo ahambe. Kulesi senzo esisha sikaPerseus, amaza omsindo ayehlonzwe izazi zezinkanyezi akhishwa futhi azwakala okokuqala ngqa. Amaza omsindo adonselwa ohlangothini lwe-radial, okungukuthi, kude nendawo. Kamuva, amasignali ahlanganiswa kabusha ebangeni lokuzwa komuntu, akhuphule izinga lawo langempela ngama-octave angama-57 nama-58.
Umsindo uzwakala izikhathi eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-144 futhi izikhathi eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-288 ngaphezu kokuvama kwawo kwasekuqaleni. Ukuskena kufana ne-radar ezungeze isithombe, okukuvumela ukuthi uzwe amagagasi aqhamuka ezindaweni ezihlukene.
Amazwi engeziwe kwenye imbobo emnyama
Ngaphezu kweqoqo le-Perseus lemithala, ukuzalwa okusha komunye umgodi omnyama odumile kuyaqhubeka. Ngemuva kwamashumi eminyaka ocwaningo lososayensi, i-Messier 87 black hole izuze isikhundla sosaziwayo emphakathini wesayensi ngemuva kokuthi yethule okokuqala iphrojekthi ye-Event Horizon Telescope ngo-2019.
Indawo ekhanya kakhulu kwesokunxele sesithombe yilapho imbobo emnyama ikhona. Isakhiwo ekhoneni eliphezulu kwesokudla yindiza ekhiqizwa umgodi omnyama. Kuhle ukusho ukuthi i-jet ikhiqizwa yindaba ewela emgodini omnyama.
I-Sonification iskena isithombe ngamaleveli amathathu ukusuka kwesokunxele kuye kwesokudla. Ngakho le "kwaya yasemkhathini" yaba khona kanjani? Amaza omsakazo abelwa amathoni aphansi kakhulu, idatha yokubona kuma-midtones kanye ne-X-ray (etholwe u-Chandra) kumathoni aphezulu.
Izingxenye ezigqame kakhulu zesithombe zihambisana nezindawo ezinomsindo kakhulu zokuthi sonification. Kulapho izazi zezinkanyezi zathola khona umgodi omnyama we-solar owu-6.500 billion othathwe yi-Event Horizon Telescope.
Bawubambe kanjani umsindo?
Nakuba abantu bengenakho ukuzwa okuthuthuke kakhulu, ukuzwakala kwendodana okufinyelelwa ososayensi kuvumela la maza abanjiwe ukuba aphinde ahlanganiswe phakathi kwendlebe yomuntu, ngesilinganiso sama-octaves angu-57 no-58 ngaphezu kwephimbo langempela, okusho ukuthi kuzwakala angu-144 no-288. XNUMX ibhiliyoni ngokuphindwe kaningi kune-frequency yayo yokuqala, okuyiquadrillion.
Nakuba lesi kungesona isikhathi sokuqala ukwenziwa kwalokhu kufakwa kwendodana, kusukela kulokhu amaza omsindo wangempela aqoshwe yiCXC abuyekezwa. Kubalulekile ukugcizelela ukuthi isayensi yezinkanyezi ihamba phambili, njengoba eminyakeni emithathu nje edlule isithombe sangempela somgodi omnyama ophindwe kasishiyagalombili ubukhulu besimiso sonozungezilanga sanyatheliswa.
Ngakho-ke manje uyazi ukuthi yiziphi izilo kanye nezesabekayo amaplanethi nemithala yonke engafuni ukuhlangana nayo.
Ukusabela komphakathi ekutholakaleni
Umbono oyiphutha odumile wokuthi akukho msindo emkhathini kulandela iqiniso lokuthi indawo enkulu iyindawo engenalutho, ayinikezi isisetshenziswa ukuze amaza omsindo asakazeke. Kodwa iqoqo lomthala linenani elikhulu legesi elingagubuzela amakhulu noma izinkulungwane zemithala, linikeze isisetshenziswa sokuhamba kwamaza omsindo.
Singayizwa le misindo ngoba i-NASA isebenzisa umshini womsindo ocubungula idatha yesayensi yezinkanyezi ebonwa indlebe yomuntu.
Izimbobo ezimnyama zinamandla adonsela phansi anamandla kangangokuthi awukwazi ngisho nokubona ukukhanya. I-NASA ayizange inikeze idatha eningi ngalokho okutholile emgodini omnyama, kodwa lapho imisindo yembulwa, i-intanethi yagcwala imibono ethi "umsindo wezipoki" noma "izigidi zezinhlobo ezahlukene" zokuphila. .
Emazwaneni angaphezu kuka-10.000 i-NASA efakwe ezinkundleni zokuxhumana, amanye asuka ku-"into enhle kakhulu owake wayizwa" kwabanye abathi "hlala kude noMhlaba" noma "lena imisindo ye-cosmic horror".
Lapha sikushiya nomsindo wembobo emnyama:
Ngithemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi imbobo emnyama izwakala kanjani kanye nokutholwa okubaluleke kakhulu kusayensi yezinkanyezi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ikhala kanjani imbobo emnyama?